Gris na osisi ya dị nsọ | Njem zuru oke
Gris na osisi ya dị nsọ
Enwere ike ịsị na a osisi dị nsọ mgbe o nwere ihe pụrụ iche okpukpe pụtara maka ebe. Communitiesfọdụ obodo nwere otu ụdị dị ka ihe dị nsọ, obodo ndị ọzọ nwere ụdị ọzọ.
Enwere osisi dị nsọ dịka Thor's Oak (Germanic), ma ọ bụ osisi apụl na Gris oge ochie.
Site n’ife osisi, akụkọ ifo na akụkọ ifo banyere njirimara ya amalitela ịmalite. Ka ọ dị ugbu a, enwere osisi ole na ole dị ka ihe dị nsọ yana amachibidoro igbu ha.
Na Gris, ndị poplar metụtara ndị nwụrụ anwụ, Heracles mgbe ọ gbadara Hel, o kpuru okpu-eze emere site na akwụkwọ osisi ahụ. Gbanye Na odyssey ọ bụ akara nke mbilite n’ọnwụ. N'aka nke ọzọ, a raara poplar ojii nye chi nwanyị nke ọnwụ, Hecate (chi nwanyị nke mba amaala na Mycenaean Greece, metụtara ịgba afa na "Queen of Ghosts").
Cypress ahụ dị nsọ kemgbe oge ochie, na Gris bụ osisi ọnwụ ma emesia ọ raara nye Saturn, emesịa tinye ya na Pluto.
Ndi Naiad Thyia (otu n'ime mmiri mmiri site na isi iyi n'ugwu Parnassus) bụ nne osisi cypress. E ji osisi cypress mee ibo ụzọ nke ụlọ arụsị Greek na nke Rom, dịka ibo ụzọ nke Saint Peter na Vatican.
Oak holm bụ osisi dị nsọ na mpaghara Mediterenian niile, a na-ekwu na Zeus nọ ọdụ na-atụgharị uche n'okpuru otu n'ime ha.
A na-asọpụrụ osisi ash dị ka ihe nnọchianya nke ikpe ziri ezi nke Chineke.
A gbanwere Daphne na laurel ka ọ gbanahụ Apollo ma mgbe ọ chọpụtara, ọ kwupụtara na ọ bụ osisi dị nsọ.
Osisi apụl ka edobere nye Aphrodite.
Myrtle (senti) na rose jikọtara Aphrodite.
Osisi oliv na-eso Atens na ngosipụta ya site na mmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Gris na osisi ya dị nsọ
Otu esi aga agwaetiti Zakynthos